Mogadishu Journal » 2021 » February » 17
(Daawo Sawirro) RW Rooble oo qodob muhiim ah ka dalbaday Ganacsatada Muqdisho
Muqdisho:-Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa kala hadlay ganacsatada Soomaaliyeed in aysan shacabka ku qaaliyeyn maciishadda iyo waxyaabaha daruuriga u ah nolosha bulshada xilligan dalku wajahayo laba kacleynta...
Wasiir ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabelle oo xilka laga qaaday (Wareegto)
Madaxweynaha Dowladda Hirshabeelle Mudane Cali Guudlaawe Xuseen ayaa xilkii ka qaaday Wasiirkii Maaliyadda Hirshabeelle Mudane Cabdishakuur Maxamed Xasan. Guudlaawe ayaa Wasiirka Wasaarada Maaliyada iyo Horumarinta Dhaqaalaha ugu Magacaabay Mudane Dr. Maxamed Maxamuud Cabdulle...
Kiisaskii ugu badnaa cudurka COVID-19 oo maanta Somalia laga diiwaan-geliyey
Muqdisho:-Wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya (XFS) ayaa xaqiijisay in 24-kii saac ee lasoo dhaafay dalka laga diiwaan geliyay 127 xaaladood oo COVID-19 ah, taasoo ka dhigeysa tiradii ugu badneyd ee maalin qura dalka laga helo mudooyinkan. Qoraal ka soo baxay...
Cali Guudlaawe oo xariga ka jaray telefishinka cusub ee Maamulka Hirshabelle (Sawirro)
Madaxweynaha Dowlad goboleedka Hirshabeelle Mudane Cali Guudlaawe Xuseen ayaa maanta xariga ka jaray TV-ga cusub ee Hirshabeelle kadib munaasabad ka dhacday magaalada Jowhar. Munaasabada xariga looga jarayay Tv-ga Madaxweynaha waxaa ku wehliyay Gudoomiyaha Baarlamaanka Dr....
Qoor Qoor oo la kulmay Wasiirka Gaashaandhiga iyo Hogaanka Maxkamada Ciidamada (Sawirro)
Waxaa maanta magaalada Dhuusomareeb ee caasimada dowlad goboleedka Galmudug gaaray Wasiirka Gaashaandhiga Xukuumada federaalka Soomaaliya iyo Hoggaanka heerarka kala duwan ee maxkamadda ciidamada qalabka. Wasiirka iyo gaashaandhiga iyo xubnaha la socday waxaa garoonka diyaaradaha...
Qisada nololeed ee Sheekh Nuur Baaruud Gurxan oo xalay ku Geeriyooday Muqdisho
Muqdisho:-Wuxuu ahaa sheikh caan ah iyo xubin kamid ah Majmaca Culimada Somaaliyeed. Burburkii dalka iyo waqtiyadii adkaa ee waddanku soo maray, wuxuu qeyb ka ahaa dacwada iyo faafinta qeyrka iyo samaha. Dad badan, laakiinse, waxay ku barteen kitaabadii uu ka aqrin jiray Radio...
War-Murtiyeed ka soo baxay Shirkii Guddiga farsamada ee ka socday Baydhabo (Akhriso)
Shirka Guddiga Farsamada Arrimaha Doorashada Federaalka ee ku qabsoomay magaalada Baydhabo ee caasimadda kumeelgaarka ah ee Koonfur Galbeed 10-16-kii Febaraayo 2021 waxa uu ku soo dhammaaday guul. Guddiga oo ka duulaya mabaadi’da aasaasiga ah ee wadar ogol, isu tanaasul, is...
Gudoomiyaha Aqalka sare oo Qoraal diray Farmaajo iyo Madaxda maamul goboleedyad
Muqdisho:-Guddoomiyaha Golaha Aqalka Sare ee Baarlamanka Soomaaliya Cabdi Xaashi ayaa qoraal uu ku dalbanayo in aan la fara galin doorashada Xildhibaanada labada aqal ee Gobolada Waqooyi u diray Madaxweyne Farmaajo iyo Madaxda maamul goboleedyada dalka. Qoraalka uu soo saaray...
Xukuumada oo soo saartay Amar ku socda Shaqaalaha Dowlada Soomaaliya (Akhriso)
Muqdisho:-Wasaarada Shaqada iyo arimaha bulshada Xukuumada Soomaaliya ayaa soo saartay amaro ku socda Shaqaalaha dowlada si looga hortago faafitaanka cudurka Carona Virus oo mar kale dalka kusoo laabtay kuna sii faafaya. Qoraalka kasoo baxay Wasaarada Shaqada ayaa lagu faray...
Mbappe wuxuu noqon doonaa heerka Messi iyo Ronaldo – Griezmann
Kylian Mbappe ayaa seddexleey u tuuray Barcelona, ​​Antoine Griezmann ayaana qaba inuu weeraryahanku dhawaan noqon doono kan ugu fiican adduunka. Kylian Mbappe ayaa sii wadi kara inuu la mid noqdo Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo ka dib markii seddexleeydiisii ​​uu arkay Paris...
Donald Trump slams Republican legislator Mitch McConnell, who has blamed former US president for Capitol riot. 17 Feb 2021 In the latest example of a growing rift in the United States Republican Party following the impeachment of Donald Trump, the former US president on...
GUDDIGA FARSAMADA ARRIMAHA DOORASHADA FEDERAALKA: War-Saxaafadeed Baydhabo, Febaraayo 16, 2021; Shirka Guddiga Farsamada Arrimaha Doorashada Federaalka ee ku qabsoomay magaalada Baydhabo ee caasimadda kumeelgaarka ah ee Koonfur Galbeed 10-16-kii Febaraayo 2021 waxa uu ku soo...
DEG DEG: Shiikh Nuur Baaruud Gurxan oo caawa ku geeiyooday Muqdisho
Muqdisho:-Shiikh Nuur Baaruud Gurxan oo ka tirsanaa Culimaa’udiinka Soomaaliyeed kuwooda ugu waaweyn ayaa caawa ku geeriyooday magaalada Muqdisho. Geerida Shiikha ayaa waxaa Allbanaadir Online u xaqiijiyey masuuliyiin ka tirsan DF iyo heyadda Cuimada Soomaaliyeed. Wararka ayaa...
Shirkii Baydhabo ee guddiyada DF & D/Goboleedyada oo heshiis lagu gaaray
Guddiga Farsamada ee dowladda Federaalka, Dowlad goboleedyada iyo Gobolka Banaadir ee ku shirayey Baydhabo ayaa la sheegay in xal laga gaaray qodobadii la isku hayay ee caqabada ku ahaa qabsoomida doorashada. Qodobada isfahamka laga gaaray ayaa waxaa ka mid ah arrinta Guddiga...
Ciidamada Maraykanka ee la socda Markabka USS Winston S. Churchill ee xambaara gantaalaha wax burburiya (DDG-81) ayaa sheegay in iyagoo raacaya xeerka caalamiga ah ay qabteen hub fara badan oo loo tahriibinayey Somalia. Markabkan oo ka mid ah raxanta 5-aad ayaa ku jirey roondo...